Faa'iidooyinka ganacsiga ee Forex | ECN Lacagta Ganacsi Lacageed ee FXCC
Home / About / Waa maxay sababta FXCC?
Maxay tahay FXCC? Taasina waa sababta ..
Waxaa jira shaqaale badan oo ka shaqeeya ganacsigeena oo doonaya ganacsigaaga. Sidaa daraadeed waxa ka soocaya FXCC inta kale, maxaan u tixgelineynaa nafteena in ay noqdaan kuwa ugu fiican? Waa maxay sababta aad nala soo wareegi kartid, halkii aad ka heli lahayd qaar ka mid ah macmiilaha kale? Maxaa noo dhigi kara?
Uma baahnid inaad noqoto mid sarreysa oo shakhsi ah si aad u aragto farqiga FXCC, waxaan leenahay ficil at FXCC; "dhirta caleenta qoyan waxay ka soo baxaan kuwa yar yar". Waxaan u adeegsan karnaa sababtoo ah waxaanu goob joog u nahay macaamiisha badan, kuwaasoo naga ganacsanayey tan iyo markii la aasaasay, inoogu kobcaya ganacsadaha aan caadiga ahayn.
Sidaas awgeed waanu ku faraxsanaan doonaa inaan kaa caawinno riyadaada, wax kasta oo ka mid ah wareegga kobaca ee hadda aad joogto. Cusbooneysiin cusub? Soo dhawow, aan bilowno. Xirfad la yiraahdo? Waxaan u maleyneynaa inaan heysano wax adiga kuu gaar ah, waa arrin dhab ah oo isbeddel ah oo kuu muujinaysa.
Waxaan sidoo kale ka soo hor jeednaa dabeecadeena ah inaad noqoto "macmiil dhinacaaga". Laakiin sidee baannu kuugu jirnaa "dhinacaaga"? Marka hore, waxaan rabnaa inaad ku guulaysato, waxaan u baahanahay inaad ku guulaysato oo aad horumariso oo aad horumariso xirfadahaaga ganacsade ahaan. Waa arrin macquul ah markaad ka fekerto. Ganacsatada guuleysta, aqoonta leh, ganacsatada xirfadlayaasha ah ayaa ku faraxsan ganacsatada. Haddii aad ku guuleysato markaas waxaad sii wadi doontaa in aan ganacsiga nala sii wado oo aan ku raaxeysano dhammaan adeegyada aanu bixinayno.
Waxaan markii hore bilaabay ganacsiga sida fudud oo fudud oo macquul ah iyo sida aan gaarnay qaar badan oo ka mid ah horumarinta kobcinteena, waxaan kufarnay inagoo ka sii fiicneyn. Maaddaama tiknoolajiyada wacyigelinteena ay horay u socotay xawaalad degdeg ah, waxaan isku duubnay oo waxaan ku jirnay wadnaha dhammaan farsamada casriga, si aan u hubinno in aan si sax ah ugu tiirsanaa jarista xirfaddayada. Waxaan hadda samaynay sumcad aad u fiican, oo wali ku salaysan ujeeddadeenii asalka ah ee fududaynaya geeddi-socodka ganacsiga, iyada oo macaamil-xannaanaynaya miisaaniyadda ganacsigeenna. Waxaan ula dhaqmaa mid kasta oo ka mid ah macaamiisheena si taxaddar leh oo tixgelin leh.
Waxaan kaa caawin karnaa inaad ku guuleysato adigoo bixinaya jawi dhammaystiran oo ganacsi iyo nadaafadda oo lacag la'aan ah si aad uga ganacsato; amarradaadu si toos ah ayay u socdaan suuqa oo waa la isku wada dhigaa, ma jiraan faragelin macaamil ganacsi. Isticmaalidda nooca ECN / STP waxay hubisaa inaad adigu suuqa u galayso sida ugu dhakhsaha badan tiknoolajiyada hadda jira. Waxaad heli doontaa qiimaha ugu fiican oo buuxiya suuqyada keeni kara, sida habka caddaalad ah oo hufan sida ugu macquulsan.
Waxaan sidoo kale kaa caawinaynaa sidii aad u horumarin laheyd ganacsatada adiga oo bixiya cilmi baaris heer sare ah. Ma aha qoraallada caadiga ah ee la xirxiray iyo jahawareer kala duwan, inta badan waxa loo soo gudbiyaa ka dib marka la eego, kaas oo aad arki doontid bixiyayaal kale. Laakiin si taxadar leh loo tixgeliyo, macluumaad ku habboon oo faahfaahsan, si ay uga caawiso gargaarkaaga go'aan qaadashada
Waxaan nahay adeeg kaliya oo dil ah. ECN Lacagta Brokers waxay ka faa'iideystaan ​​khidmadaha yaryar oo kasta oo la iibsado. Tirada sarrifka ah ee macaamiisha baqdiyeyaashu waxay dhalinayaan, sarrifka sare ee faa'iidada. Helitaanka amarkaaga suuqa iyo amarka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, waa hadafkeena tooska ah iyo ujeedada.
Sidaa darteed waxaad haysataa; oo ku saabsan hordhaca ah ee nooca kaas oo ah sida: cad, si kooban oo sax ah sida adeegga shakhsi ahaaneed ee aan u fidino macaamiisheena. Waxaa laga yaabaa inaad isku dayday qaar ka mid ah kuwa intiisa kale, maxaad noogu oggolaanaysaa fursad aan ku muujinno sababta aan ugu fekeray inaan ugu fiicanahay?